ORINASA IRAY ENY AMPANGABE : Orinasa tratra nampiasa zaza tsy ampy taona no tsy manaja ny zon’ny mpiasa
Noraisim-potsiny. Tratra nampiasa zaza tsy ampy taona no sady tsy manaja ny zon’ny mpiasa ny orinasa iray eny Ampangabe ao amin’ny Distrikan’Ambohidratrimo. 15 octobre 2019
Nidina ifotony tao amin’ity orinasa ity ny tompon’andraikitra momba ny asa nanadihady ny mahakasika ny fijoroany. Fantatra nandritra izany fa maro amin’ireo mpiasa no tsy misitraka akory ny zo natao ho azy ireny. Tafiditra ao anatin’izany, ohatra, ny tsy fandoavan’ny orinasa ny volan’ny Cnaps sy ny tsy fampidirana akory ny mpiasa ao anatin’izany. Manginy fotsiny koa ankoatra izay ny tsy fanomezana fiahiana ara-pahasalamana, takin’ny lalàna hositrahin’ny mpiasa rehetra.
Nisy fotoana moa efa nitroatra sy nitaraina ary nitokona mahakasika ity orinasa ity ny mponina eny an-toerana. Voalaza mantsy fa manimba ny tontolo iainana no sady miteraka tsy fahasalamana ho an’ny mponina ny setroka mainty sy mamofona avoakan’ny orinasa. Tsy mifanalavitra amin’ny toeram-ponenan’ny mponina rahateo ny orinasa. Miandry fandraisana andraikitra avy amin’ny tompon’andraikitra rehetra voakasika, araka izany ireo mpiasa sy mponina eny an-toerana.